Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Manchester United Oo Dalab Ka Gudbineysa Haaland, Lokonga Oo Tijaabada Caafimaadka U Maraya Arsenal Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga: Manchester United oo Dalab ka gudbineysa Haaland, Lokonga oo tijaabada Caafimaadka u maraya Arsenal iyo Qodobo kale
July 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Liverpool ayaa dalab u dirtay Wolves iyo garabka reer Spain Adama Traore, oo 25 jir ah (Football Insider)
Man United ayaa lagu soo waramayaa in ayna isku dayi doonin in ay la soo saxiixato weeraryahan cusub inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan taas badalkeedana ay sugi doonto ilaa sanadka dambe. Sida laga soo xigtay Manchester Evening News
Hector Bellerin, oo 26 jir ah, ayaa doonaya inuu ka tago Arsenal kuna biiro kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee Inter Milan . Daafaca dambeedka bidix ee reer Spain ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Emirates xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, Paris St-Germain ayaa markaas ka dib la sheegay inay tahay meesha ugu macquulsan ee uu tagayo. (FourFourTwo)
Daafaca reer Spain Sergio Ramos oo 35 jir ah ayaa iska diiday dalabyo uga yimid kooxaha Arsenal iyo Manchester City ka hor inta uusan si bilaash ah ugu biirin Paris Saint-Germain . (Goal)
Liverpool ayaa isku diyaarineysa inay 35 milyan oo ginni ku dalbato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Atletico Madrid iyo xulka Spain Saul Niguez, 26. (AS)
Leicester, AC Milan iyo Inter Milan ayaa muujiyey xiisaha ay u qabaan saxiixa weeraryahanka reer Brazil Philippe Coutinho, oo 29 jir ah oo ka socda Barcelona. (Sport)
Albert Sambi Lokonga ayaa qarka u saaran inuu maro tijaabadacaafimaadka Arsenal jimcaha ka hor inta uusan xagaaga ka soo dhaqaaqin Anderlecht , sida lagu sheegay warbixin. Sida laga soo xigtay shabakada Belgian HLN ,
Weeraryahanka reer Holland Memphis Depay, oo 27 jir ah, ayaa aqbalay 30% mushahar dhimis kaliya seddex isbuuc ka dib markii uu ku soo biiray Barcelona iyadoo kooxdu u baahan tahay inay yareyso qarashaadka si ay ugu hogaansato shuruucda mushaaraadka La Liga. (goal)
West Ham ayaa tartan kala kulmeysa goolhayaha Roma Robin Olsen, iyadoo Atletico Madrid iyo Lille ay isha ku hayaan . Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Sweden, 31, ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku jiray xilli ciyaareed amaah ah oo uu ku qaatay Everton xilli ciyaareedkii hore, bandhigyadiisii ​​Euro 2020 ayaa soo jiitay Hammers. (AS)
Paris St-Germain ayaa rumeysan inay ku heli karaan Paul Pogba qiimo jaban oo 50 milyan ginni ah iyagoo qorsheynaya inay weerar ku qaadaan 28 jirka khadka dhexe ee Manchester United iyo France. (dailystar)
Tababarihii hore ee Manchester United Louis van Gaal oo 69 jir ah ayaa la filayaa inuu kala wareego 51 jirka Frank de Boer tababaraha Netherlands. (NOS)
Weeraryahanka reer France ee kooxda Chelsea Olivier Giroud oo 34 jir ah ayaa qarka u saaran inuu heshiis labo sano ah u saxiixo kooxda reer Talyaani ee AC Milan. (dailymail)
Tottenham ayaa ka fiirsaneysa inay dalab ka gudbiso daafaca aadka loo qiimeeyo ee Wolfsburg Maxence Lacroix. Xiddiga reer France, oo 21 jir ah, ayaa kaga soo biiray kooxda ka ciyaarta Bundesliga kooxda Sochaux xagaagii hore, waxaana lala mid dhigay Rio Ferdinand. (tbrfootball)
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Manchester United Tahith Chong ayaa ku dhow inuu heshiis amaah ah kula biiro kooxda Birmingham. 21 jirkaan reer Holland ayaa amaah ku joogay labadii sano ee la soo dhaafay kooxda reer Belgium ee Club Brugge iyo kooxda Jarmalka Werder Bremen . (Telegraph)
Daafaca midig ee Juventus Danilo, oo 29 jir ah, ayaa shaaca ka qaaday inuu jeclaan lahaa Gabriel Jesus – saaxiibkiisii ​​hore ee Manchester City iyo saaxiibkiis kale ee reer Brazil – inuu kula soo biiro Turin, iyadoo 24 jirkaan weerarka ka ciyaara lala xiriirinayo kooxda Serie A ka dhisan. (Si)
Tottenham ayaa safka hore kaga jirta saxiixa Bologna iyo daafaca Japan Takehiro Tomiyasu, oo 22 jir ah (Football Insider)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa u sheegay madaxda Anfield saddexda ciyaartoy ee uu doonayo xagaagan oo uu ku jiro garabka reer France ee Kingsley Coman. 25 jirka Bayern Munich ayaa Reds ku kici kara adduun dhan £ 86m. (Mirror)
Dhanka kale, Reds ayaa sidoo kale ceyrsaneysa xiddiga reer Netherlands Donyell Malen ka dib markii 22 jirka PSV Eindhoven uu ka soo muuqday Euro 2020. (Express)
Ragga Marcelo Bielsa weli waxay doonayaan inay ka qaataan garabka Ingriiska Ryan Kent, 24, oo ka socda Rangers . (Theathletic)